पर्यटकहरू कोरोनाभाइरस फैलाउँदै: गोरिल्ला र चिम्पान्जीहरू जोखिममा छन्?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड » पर्यटकहरू कोरोनाभाइरस फैलाउँदै: गोरिल्ला र चिम्पान्जीहरू जोखिममा छन्?
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • DR कंगो ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • रुवाण्डा ताजा खबर • तान्जानिया ब्रेकिंग न्यूज • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • युगान्डा ताजा समाचार • विभिन्न समाचार
माउन्टेन गोरिल्लाहरू र चिम्पान्जी रुवाण्डा, युगान्डा, तान्जानिया र कo्गोमा यात्रा र पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण र लाभदायक हिस्सा हुन्। अफ्रिकाका संरक्षणवादीहरू अफ्रिकाका माउन्टेन गोरिल्लाहरू र चिम्पान्जीहरू पूर्वी र मध्य अफ्रिकाका प्राइमेट वासस्थानहरूमा आएका कोविड १ to मा देखिएको देखेर चिन्तित छन्।
यो प्रकृति को लागी विश्वव्यापी कोष (WWF) कोविड १ of को रूवाण्डा, युगान्डा, कo्गो र अफ्रिकाको सम्पूर्ण भूमध्यरेखा ज in्गलमा बस्ने पहाड गोरिल्लाहरूमा सम्भवतः प्रसारको बारेमा चेतावनी गरिएको छ।
यस भाइरसले विश्वभरि धेरै मानिसहरूलाई संक्रमित गरिसक्दा संरक्षणवादीहरूले अफ्रिकाको लोपोन्मुख हिमाली गोरिल्लाको जोखिमको बारेमा चेतावनी दिएका छन्।
माउन्टेन गोरिल्लाहरू बाहेक, पश्चिमी तञ्जानिया, युगान्डा र बाँकी मध्य अफ्रिकाका चिम्पान्जी समुदायहरू कोभिड -१। संक्रमण पत्ता लगाउँदा यस्तै खतरामा छन्।
डब्ल्यूडब्ल्यूएफले चेताउनी दिएको छ कि प्राइमेटले humans percent प्रतिशत मानिसमा डीएनए बाँडफाँड गर्दै जनावरहरुलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण हुने खतरा रहेको बताएका छन्।
कo्गोको विरुंगा नेश्नल पार्क र छिमेकी रुवाण्डा दुवै गोरिल्लाहरुलाई जोगाउन पर्यटकहरुका लागि बन्द छन। युगान्डाले आफ्नो गोरिल्ला पर्यटन बन्द गरेको छैन, तर आगन्तुकहरु को ड्रप को पार्क मा मानिसहरुको आवागमन सीमित थियो।
विगत years० बर्षको सफल संरक्षण अभियान पछि माउन्टेन गोरिल्ला संख्या १,००० भन्दा बढी पुगेको छ र तिनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
अफ्रिकाका प्राइमेटोलोजिस्ट जेन गुडालले कोविड १ p को महामारी मानवबाट प्राईमेट्समा फैलाएकोमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनले लन्डनमा केही दिन अघि भनेकी थिइन कि ग्रेट वानरहरू मानव श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूका लागि संवेदनशील हुन जान्छन्। अनाथ चिम्पहरूको लागि उनको अभयारण्यमा, कर्मचारीले COVID-19 बिरूद्ध सावधानीको रूपमा सुरक्षा गियर लगाएका छन्।
अफ्रीकामा पहाड गोरिल्लाहरू
"यो ठूलो चिन्ताको विषय हो किनकि हामी अफ्रिकाभरि सबै चिम्प्सलाई जोगाउन सक्दैनौं र भाइरस तिनीहरूमा पसे पछि म यो प्रार्थना गर्दछु, त्यसो भए मलाई के हुन्छ भनेर थाहा छैन," जेनले भनिन्।
रुवाण्डाले गोरिल्ला र चिम्पान्जीजस्ता प्राइमेटहरूको घर रहेको तीनवटा राष्ट्रिय पार्कमा अस्थायी रूपमा पर्यटन र अनुसन्धान गतिविधिहरू बन्द गर्दैछ।
माउन्टेन गोरिल्लाहरू केही श्वासप्रश्वासको रोगहरूले ग्रस्त हुन्छन् जसले मानिसहरूलाई कष्ट दिन्छ। एक सामान्य चिसोले गोरिल्लालाई मार्न सक्छ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ भन्छ, एउटा कारण किन पर्यटक ट्र्याकि g गोरिल्लालाई प्राय: नजिक जान अनुमति दिइदैन।
कंगो, युगान्डा र रुवाण्डामा करीव १,००० पहाडी गोरिल्लाहरू संरक्षित क्षेत्रमा बस्छन्। जनतालाई यी क्षेत्रहरू भ्रमण गर्न अनुमति दिनु महत्त्वपूर्ण र लाभदायक छ। जे होस्, कोओविड १,, कोरोनाभाइरसको कारण भएको रोगले विरुंगा पार्क अधिकारीहरूलाई अस्थायी प्रतिबन्धको आदेश दिए।
युगान्डाले गोरिल्ला पार्क पर्यटन बन्दको घोषणा गरेको छैन। यद्यपि युरोप र अन्य स्थानबाट आएका आगन्तुकहरूको संख्या एकदमै कम भएको छ र यसले पर्यटकहरूको ठूलो भीडविना बगैंचा बनाएको छ।